Ngiyikhipha kanjani futhi ngiyifake kabusha i-firewall yami? - Amawindi
Main > Amawindi > Faka kabusha i-windows firewall - izixazululo eziqinile
Faka kabusha i-windows firewall - izixazululo eziqinile
Ngiyikhipha kanjani futhi ngiyifake kabusha i-firewall yami?
Ungakwenza kanjaniFaka kabushaI-Windows DefenderI-Firewallku-Windows 10
Isinyathelo 1 - KuFaka kabushaI-Windows DefenderI-Firewall, vula imenyu yokuqala, bese uthayipha cmd.
Isinyathelo 2 - Lesi senzo sizokwethula ukwaziswa kwe-UAC kusikrini sakho se-PC, khetha u-Yebo.
Phinda Usebenze kabusha Isevisi.
Qala iWindows DefenderI-FirewallInsiza.
Setha kabusha iWindows DefenderI-FirewallUkulungiswa.
Iningi labantu lifuna ukukhipha iWindows Defender kwikhompyutha Windows 10.
inombolo yokuphoqelela ye-microsoft
Ngakho-ke kungenzeka yini ukukhipha iWindows Defender kwikhompyutha ye-Windows 10, impendulo elula ithi 'cha'. Awukwazi ukukhipha iWindows Defender kwikhompyutha ye-Windows 10, kepha ungalandela izinyathelo ezilula, ngakho impendulo elula ithi 'cha'. Awukwazi ukukhipha iWindows Defender kwikhompyutha ye-Windows 10, kepha ungalandela izinyathelo ezilula ukuyicisha unomphela noma okwesikhashana.
Ngakho-ke ake sibheke ukuthi ungakhubaza kanjani iWindows Defender Antivirus manje esethiwa kabusha iWindows Security. Ungayikhubaza kanjani. Okwesikhashana nokuthi ungayikhubaza kanjani unomphela.
Ngakho-ke asiqhubeke futhi sibone ukuthi singakwenza kanjani lokhu. Manje, ukucisha iWindows Security, bengizothi Windows Security Security. Ukuphepha kweWindows okwesikhashana, sinezinyathelo ezithile okufanele sizithathe.
Ukuyikhubaza, chofoza kwesokudla iWindows bese uya kuzilungiselelo. Chofoza kuzilungiselelo bese uya ku-Update & Security. Lapha, chofoza iWindows Security, Virus & Threat Protection.
Chofoza kulokhu bese upheqela phansi ku-Virus nezilungiselelo zokuvikela ukusongela. Bese uchofoza okuthi Phatha Izilungiselelo Manje, Ukuvikelwa Kwesikhathi Sangempela, Ukuvikelwa Okukhululwe ngamafu, Ukuhanjiswa Kwephethini Okuzenzakalelayo, ngakho-ke lezi yizinto ezinikwe amandla ku-Windows Security, sidinga ukuzicisha. I-Real TimeProtection nayo ayisebenzi.
Lokhu kuyasiza uma ufaka uhlelo lokusebenza futhi iWindows Security ayikuvumeli lokho kufakwa kwikhompyutha yakho. Lesi yisixazululo sesikhashana, lapho uqala kabusha ikhompyutha izoqala iWindows Security. Kepha kuzoqala ngempela? Ngakho-ke ake sihlole, ngemuva kokuqalisa kabusha, ukuvikelwa kwesikhathi sangempela kuzoqala ngokuzenzakalela kepha ezinye izinto ngeke ziqale.
Kepha iWindows Security izoqala ngokwayo. Uma wenza kanjalo, yisixazululo sesikhashana. Khubaza unomphela i-antivirus.
thenga abalandeli be-xbox
Ukulandela le ndlela sidinga ukuvula ibhokisi lokuqalisa bese uthayipha ku 'gpedit.msc'. Manje ku-'gpedit.msc 'kufanele sichofoze ekucushweni kwamakhompiyutha bese uchofoza ku-Administrative Templates bese ubheka iWindows Defender elapha.
I-Windows Defender Antivirus, nweba lokhu, manje uzobona le nketho Khubaza iWindows Defender Antivirus chofoza kuyo kabili. Khetha Kuvunyelwe, qhafaza Faka isicelo, bese uchofoza Ok. Uma uqala kabusha ikhompyutha yakho manje, iWidows Defender izokhutshazwa unomphela.
Ngizobheka ukuthi ngabe lokhu kukhutshaziwe. Manje usungabona i-Virus & Usongo Ukuvikelwa kuthi 'Isenzo Siyadingeka'. Inhlangano yakho isho ukuthi inqubomgomo iyasetshenziswa kule khompyutha.
IWindows Defender ikhutshazwe unomphela. Noma uqala kabusha ikhompyutha, ngeke iqale kabusha. Ngakho-ke lesi yisixazululo saphakade sokukhubaza unomphela iWindows Security / Windows Defender.
Indlela elandelayo ukusebenzisa ukhiye wokubhalisa ukukhubaza iWindows Defender. Ngakho-ke sizovula ibhokisi le-Run bese uthayipha regedit bese ushaya u-Enter bese ushaya u-Yebo. Ngakho-ke le yindlela ye-Windows Defender 'Ikhompyutha HKEY_LOCAL_MACHINE software izinqubomgomo Microsoft Windows Defender'.
Ngakho-ke nansi indlela futhi udinga ukuzulazula kuleyo ndlela, chofoza ku-Microsoft bese uyayandisa, bese uyi-Windows Defender. Kuleyo folda yeWindows Defender udinga ukuchofoza kwesokudla kuyo bese wakha inani le-valueDWORD bese uthayipha u-'DisableAntispyware '. Hit Enter bese uvula ibhokisi ukuhlela inani Faka 1 njengedatha yenani bese uqhafaza Ok.
Futhi uzobona iWindows Defender manje ikhutshazwe unomphela. Lezi yizindlela ezintathu esizibonile zokukhubaza iWindows Defender - zihlala unomphela, ungasebenzisa kuphela indlela eyodwa kulezi zindlela ezi-2 okuhloswe ngazo ukuthi zihlale unomphela. noma ngabe ulandela indlela ye-gpedit.msc, ukhiye wokubhalisa wenziwa kusihleli se-Regedit.in sombhalo futhi awudingi ukulandela indlela yokubhalisa.
Uma ungayazi irejista, ungalandeli indlela yokubhalisa. Mane wenze inqubomgomo ku-gpedit bese iWindows Defender yakho izokhubazeka unomphela. Ngakho-ke yile ndatshana.
ukubuka / ukubuka kuqala okuhlanzekile
Uma uthanda le ndatshana, sicela uchofoze inkinobho ethi 'Thanda', chofoza inkinobho ethi 'Bhalisa' bese ucindezela isithonjana sensimbi ukunika izaziso izindatshana ezizayo. Siyabonga futhi usale kahle.
Ngiyilungisa kanjani insiza yeWindows Firewall?
Qala kabusha i-Insiza ye-Firewall. Iya kusesho, thayiphaizinsizakalo.
Yenza i-Registry tweak.
Qalisa isixazululi nkinga esizinikele ngokulanda.
Setha kabusha i-I-Firewallizilungiselelo.
Sebenzisa i-Command Prompt ukusetha kabusha ngamandlaIWindows Firewall.
Khipha izibuyekezo ezihlobene nokuphepha zakamuva.
Sebenzisa i-third-party antivirus.
Ngiyifaka kanjani kabusha iWindows Defender?
Vula imenyu yokuqala bese uthola “I-Windows DefenderSecurity Center ”isicelo.
Qonda ku- “Performance Performance & Health” kubha eseceleni, bese uqhafaza ku- “Info Info” ngaphansi kwesigaba se-Fresh Start.
Chofoza inkinobho 'Qalisa' bese ulandela imiyalofaka kabusha iWindows.
Wena noMichael nibukele okokufundisa okusheshayo kokuthi Ungayifaka Kanjani iWindows Defender Kuthisha Wakho Wekhompyutha Wokufundisa Udinga Isikhathi Esithe xaxa Ungavele ume kancane ubuyisele emuva lesi sifundo uma iWindows Defender ingafakanga ngemuva kokubuka lesi sifundo nokulandela imiyalo, sicela uxhumane ngithumele umyalezo osheshayo wesikole noma i-imeyili futhi ngizojabula ukuza ngikufakele iWindows Defender uzoya kubha yekheli lakho ungavele uthayiphe i-wwn dozeexcuse Microsoft uthule bese ushaya ukungena kuzokusa kuwebhusayithi lapho kimi bekuvele kuya kuleyo bar yokusesha eMicrosoft bese uthayipha windowsdefender bese ushaya u-enter ngokuya ngejubane lekhompyutha yakho kungathatha isikhashana futhi kungashesha uye kulena ethi windows defender homepage bese uchofoza kuyo manje bona ukuthi iwindi lakho kufanele ukuvela kubukeka sengathi kufanele manje ithi chofoza okuthi Landa Manje yiliphi leli windi okufanele ulilande bese uchofoza kulo.
Kufanele iqale uma ingasebenzi Ngemuva kwalokho ungavele uchofoze ku-Start Download, kepha kufanele iqale ngokuzenzakalela futhi ukwazi ukuchofoza ku-Save File, noma ungathi Run, chofoza kuyo maduzane kufanele ulande eyodwa I-pop-up windows lokho kufanele kube nenketho yokuchofoza ku-Run. Chofoza u-Run bese ulungisa ukufakwa bese uthola lesi sikrini lapho ungachofoza u-Okulandelayo bese kufanele uchofoze kule bubble ngamukela imigomo yesivumelwano selayisense bese ngichofoza Okulandelayo bese ufuna ukubuyela kusuku lomsebenzisi manje izilungiselelo ezinconyiwe hamba kancane g Reen Shield bese uqhafaza Okulandelayo futhi kuphela uma imibuthano yakho ingakagcwaliswa lapho kufanele uchofoze lokho ngokuphelele bese uchofoza Okulandelayo bese uqhafaza ku-Faka futhi ngethemba ukuthi lokhu kuzokufakela ngokushesha uma usuqedile ungavele ushaye uqede bese ulande iWindows Defender. Manje okumele ukwenze nje ukukhuphuka ushaye iskena futhi kuzohlala kukuskena ngokushesha, uma unenkinga nge-computer ocabanga ukuthi unegciwane noma okuthize, mane uchofoze isithonjana, kufanele kube ngezansi kwesokudla ekhoneni enza i-quickscan futhi kufanele kube njalo, ngiyabonga kakhulu
Ngisibuyisela kanjani isibhengezo somlilo seWindows Defender?
Vula ifayela le-I-Windows Defenderapp bese ukhethaI-Firewallnokuvikelwa kwenethiwekhi kubha yemenyu yangakwesokunxele. Okulandelayo, chofoza “Buyiselafirewalls to default ”inketho ngakwesokudla.
Chofoza kufayela le-Buyiselainkinobho yokuzenzakalelayo.
Uzocelwa isiqinisekiso futhi. Chofoza u-Yebo ukuzesetha kabushakonkeIWindows Firewallizilungiselelo.
Ungasusa kanjani ukusebenza kweWindows firewall Isinyathelo 1 unomphela.
Bheka isimo samanje se-firewall o Isinyathelo 5. Yenza kusebenze i-firewall unomphela
Ngizibuyisela kanjani izilungiselelo zami ze-Windows firewall?
Chofoza kusixhumanisi sokubuyisela kokuzenzakalelayo ngakwesokunxele. Chofoza inkinobho yokubuyisela okuzenzakalelayo. Lapho ibhokisi lengxoxo lokuqinisekisa livela, chofoza u-Yebo futhi izilungiselelo zakho ze-Windows firewall zizobuyiselwa kokuzenzakalelayo ngokushesha. Vula uhlelo lokusebenza le-Windows Defender bese ukhetha i-Firewall & amp; ukuvikelwa kwenethiwekhi kubha yemenyu yangakwesokunxele.
Ngiyikhipha kanjani i-Firewall yamahhala kukhompyutha yami?
Chofoza imenyu yeWindows Start. Thola bese ukhetha i-Control Panel menu, bese ukhetha Izinhlelo. Ngaphansi kwezinhlelo, chofoza okuthi Khipha uHlelo. Khetha i-Firewall yamahhala bese uchofoza kwesokudla, khetha Khipha / Shintsha. Bese uchofoza u-Yebo ukuqinisekisa inqubo yokukhipha i-Firewall yamahhala. Chofoza imenyu yeWindows Start.
incwajana esikhundleni sethebhu
Ngilivula kanjani i-firewall kwikhompyutha yami?
Chofoza ku-System and Security. Chofoza kuWindows Firewall. Uma iWindows Firewall ikhutshaziwe, isimo seWindows Firewall sizovalwa. Ukuyivula, kufasitelana lokuzulazula elingakwesobunxele, chofoza kuVula noma uvale iWindows Firewall. Ewindini lezilungiselelo elenziwe ngokwezifiso, khetha Vula iWindows Firewall bese uqhafaza KULUNGILE.
Ngilucima kanjani i-firewall yami ku-Windows Vista?
I-Windows Vista Vula imenyu yokuqala. Chofoza Iphaneli Yokulawula. Chofoza Ezokuphepha. Chofoza iWindows Firewall. Chofoza isixhumanisi esithi 'Khanyisa noma ucime iWindows Firewall'. Chofoza ibhokisi elithi 'Cishiwe (akunconyiwe)'. Chofoza OK.